Akụkọ - cikpụrụ nke oghere na-enweghị mmiri: Etu esi etinye nkwụnye mmiri na-adịghị
Cikpụrụ nke ogwe mmiri na-enweghị mmiri: Otu esi etinye oghere mmiri na-enweghị mmiri
Ogwe mmiri na-enweghị mmiri bụ plọg nwere arụmọrụ mmiri, ma nwee ike inye njikọ dị mma ma nwee ntụkwasị obi maka ọkụ eletrik na akara ngosi. Ọmụmaatụ: Ọkụ ọkụ ọkụ n'okporo ụzọ, ọkụ ọkụ ọkụ, ọkụ ngosi ọkụ, ọkụ ọkụ, ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri, akụrụngwa ụlọ ọrụ, ngwa nkwukọrịta, akụrụngwa nchọpụta, ogige azụmahịa, okporo ụzọ, mgbidi mpụga mpụga, ubi, ogige ntụrụndụ, wdg. sockets. Ya mere ị maara ihe ụkpụrụ nke oghere mmiri adịghị? You maara ka esi etinye nkwụnye mmiri na-enweghị mmiri?
Nkowa mkpirikpi nke oghere mmiri na-enweghị mmiri
Ogwe mmiri na-enweghị mmiri abụghị naanị plọg nwere arụmọrụ mmiri, kamakwa ọ na-enye njikọ dị mma ma nwee ntụkwasị obi maka ọkụ eletrik na akara ngosi. Ọmụmaatụ: Ọkụ ọkụ ọkụ n'okporo ụzọ, ọkụ ọkụ ọkụ, ọkụ ngosi ọkụ, ọkụ ọkụ, ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri, akụrụngwa ụlọ ọrụ, ngwa nkwukọrịta, akụrụngwa nchọpụta, ogige azụmahịa, okporo ụzọ, mgbidi mpụga mpụga, ubi, ogige ntụrụndụ, wdg. sockets.
E nwere ọtụtụ ụdị na ụdị nke ntọala mmiri na-ere mmiri na ahịa, gụnyere ntọala mmiri na-enweghị mmiri maka ndụ ụlọ, dịka plọg triangular, wdg, nwere ike ịkpọ ntọala, ma ha n'ozuzu ha anaghị egbochi mmiri. Ya mere, otu esi achọpụta oghere mmiri na-enweghị mmiri, mmụba mmiri na-enweghị mmiri bụ IP, ọkwa kachasị elu nke mmiri na-enweghị mmiri bụ IP68, enwere ugbu a ọtụtụ ndị na-emepụta ụlọ nke ihe nkwụnye mmiri, mana enwere ezigbo ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ntọala ụlọ, na plọg eletrik ụlọ n'ozuzu enweghị ike ịbụ Ejiri nke ukwuu adighi ike.
Ezinaụlọ n'èzí mmiri na-enweghị mmiri, 220V 10A plọg atọ, plọg nkwụnye abụọ nwere ike iji rụọ ọrụ na steeti na-enweghị nchekwa iji zute ụlọ. (Ọkwa nchekwa IP66 nwere ike igbo mkpa ezinụlọ, IP66 na-agbasasị n'ike n'ike n'akụkụ niile na-enweghị nsị mmiri, tinye ya na 1 mita mmiri maka elekere 1 na-enweghị mmachi mmiri.) Ekwesiri iburu n'uche na oghere ndị dị n'èzí bụ ihe PC, yabụ mgbochi -elere kwesịrị ịtụle.
Cikpụrụ nke oghere mmiri na-adịghị
Ogwe mmiri na-adịghị mmiri bụ igbe na-enweghị mmiri na mkpuchi nwere agbakwunye na mpụga nke mgbidi mgbidi izugbe. Igbe dị na mgbidi na ngwongwo roba, ya mere ọ nwere ike ịbụ mmiri na-adịghị mmiri; a na-eji jaket na-ekpuchi mmiri na-ekpuchi mmiri na-enweghị mmiri, na mkpịsị aka dị na-esote, na-akwado skewer pụrụ iche. E nwere okpukpu atọ nke waya anọ, nke atọ na-arụ ọrụ nke waya ise na-akwado skewer na skewer.
Ntinye nke uzo mmiri
Buru ụzọ wepụ oghere ahụ, tinyezie ihe mkpuchi mmiri ahụ n’azụ oghere ahụ, wee jikọọ waya ahụ na oghere njikọ ya dị ka polarity (waya ọkụ na L interface, eriri waya na N interface, na waya ala na E interface). Kedo sie ike na kposara, ọ kachasị mma itinye ndozi ndozi nke oghere na mgbidi.
Athlọ ịwụ mmiri na-ekpuchi mmiri
Ime ụlọ ịwụ ahụ bụ ebe kachasị dị mmiri mmiri n'ụlọ, ma ọpụpụ ahụ na-ewepụkarị mmiri na-agba agba, yabụ ị ga-elebara anya na nhọrọ na ntinye nke ntanetị n'ime ime ụlọ ịwụ ahụ:
1. Mgbe ị na-etinye ntọala nke ime ụlọ ịwụ ahụ, ọ ga-arụnye ya dị ka o kwere mee, pụọ na ngwaọrụ ma ọ bụ mmiri.
2. A ghaghị ichebe oghere nke ụlọ ịsa ahụ site na mkpuchi mkpuchi. Họrọ mgba ọkụ na ihe nkiri nchekwa plastik.
3. Mgbe ị na-azụta oghere, lelee ma ihe nkwụnye aka ahụ ezuo oke, ike ịmịnye ihe zuru ezu, na ntinye aka ya ga-esi ike. Ngwunye usoro ihe nkpuchi nke ugbu a na - ejikarị usoro extrusion siri ike, ya mere, ike ịtapu n'etiti plọg na clip na - abawanye nke ukwuu, na - ezerekwa ihe ọhụụ nke ọgbọ okpomọkụ n'oge eji ogologo oge. N'otu oge ahụ, mgbatị siri ike nke na-eme ka plọg ahụ ghara ịdị mfe ịda, nke dị mma Belata ikike ike nke ihe mmadụ kpatara.
4. Mgbe ị na-eji, gbaa mbọ hụ na aka gị kpọrọ nkụ, ejila ihe ntụgharị na ntọala banye na mmiri.
5. Na-achịkwa mma nke ntọala ndị na-agbanwe agbanwe, ngwaahịa ndị a zụrụ n'onwe ha erughị eru, ọbụlagodi na ndị mmadụ na-eji ọkụ eletrik eme ihe n'ụzọ dị mma, enwere ihe ize ndụ zoro ezo nke leakage.
N'èzí nkwụnye mmiri na-ekpuchi mmiri
Maka ịdị mma nke ọkụ n'ụlọ, ọtụtụ mmadụ na-etinyekwa ntọala n'akụkụ n'èzí, dị ka mbara ihu, pavilions, wdg. N'èzí n'ihi mmiri ozuzo na ihe ndị ọzọ, ya mere nhọrọ nke ntọala kwesịrị ị paya ntị karịa:
1. E kwesịrị ịwụnye oghere ahụ n’ebe zoro ezo ebe mmiri ozuzo na-enweghị ike iru.
2. Họrọ a ika-aha waterproof anya na mma ka mma. Ogo nke oghere mmiri adịghị mma. Ihe ize ndụ nchekwa dị ukwuu mgbe ejiri ya na mmiri ihu igwe.
3. Kwụsị ike dị n’èzí dị ka o kwere mee n’ụbọchị mmiri na-ezo iji zere ịkpata ihe ọghọm ndị ọzọ, ma gbalịa ka ị ghara ịnọ nso ebe ọkụ eletrik dị nso.
4. Oghere ndị dị n’èzí bụ ndị na-enweghị mmiri, uzuzu na ndị na-egbochi ịka nká, ya mere a ga-eji ihe ndozi mmiri na-arụ ọrụ.
5. Ihe achọrọ maka nchekwa nke plọg na ntọala ndị dị n'èzí dịtụ elu, a na-atụ aro ka ịhọrọ IP55 ma ọ bụ karịa.
Post oge: Apr-28-2020